University Financial phantsi uRhulumente Russian Federation
isifinyezo : ababhalise okokuqala
abafundi (nama.) : 80000
Musa ukulibala ukuba discuss Financial University under the Government of the Russian Federation
University Financial ebesoloko eyayidume umgangatho wemfundo umsebenzi enikelweyo. Kangangamashumi amaninzi abanezidanga zethu ziye core labo nkqubo yezemali kunye noqoqosho zeli lizwe. Phakathi kwazo kukho abalungiseleli ezemali kunye nosekela imali ngabalungiseleli zeU.SSR neRashiya, abezopolitiko, izifundiswa, oosomashishini, iintloko karhulumente kunye nezorhwebo iibhanki, iinkampani zoshishino nezemali, iirektha kwiiyunivesithi ezinkulu zangaphandle.
impumelelo yabo kunye nezinto ezifezekiswe ubungqina kakuhle igunya University Financial ngayo, umgangatho wokhuphiswano iinkqubo zoqeqesho.
Iqela le alumni Academy liqalise isigqibo ukuba imlungisele mali endowment yonke ingeniso zayo kusetyenziselwa ukuhlawula iinkqubo zophuhliso iziko, ukuphucula amaziko alo, ukuphumeza iiprojekthi ezahlukeneyo ezintsha, ukuphucula umgangatho wemfundo, kwaye nangokunjalo.
USihlalo weBhodi Yedinga Fund of Trustees A.L. Kudrin, USekela iNkulumbuso kunye noMphathiswa wezeziMali malunga Russian Federation.
Namhlanje kwiYunivesithi lwezimali zemfundo nophando entsonkothileyo inkulu, omnye kwamaziko emfundo kunye nophando phambili eRashiya kwimihlaba yezezimali, ityala, ulawulo lwemali, inshorensi, irhafu kunye irhafu, accounting, uhlalutyo zophicotho, lobudlelwane kwezoqoqosho ngezizwe, uhlalutyo umngcipheko, zinzo, iindlela zeMathematika Economics, ulawulo loluntu kunye kamasipala, umthetho nenzululwazi yezopolitiko.
KwiYunivesithi Financial iquka womnatha lonke amasebe zemimandla - kumaqabane ofisi ummeli nokuhlawulela kwaye uqoqosho iikholeji. Inani ngonyaka labafundi kwiYunivesithi ingaphezulu 30 iwaka, qhu amawaka iingcali ukuthatha izifundo zophuhliso lobungcali.
Usoloko makakhokele, kuphela ukuhlangabezana nemingeni ixesha kodwa ukuba ubizo amaxesha - lo mbono wethu impumelelo. iikharityhulam zethu ukwenza uninzi eziyimpumelelo lwezesayensi yezoqoqosho yanamhlanje yesizwe zangaphandle, kunye nobuchwepheshe zemfundo olulolona lisetyenziswa kwinkqubo yezifundo. Sisebenzisana ukuphucula inkqubo yemfundo yobomi kubandakanya uqeqesho pre-eyunivesithi ekhethekileyo besikolo, ngoqeqesho kwiingcali kunye emfundo yokuxhobisela umsebenzi, kwiyunivesithi isidanga sedigri neenkqubo isidanga yenkosi), imfundo kwizidanga (PhD kunye zobugqirha nezifundo), imfundo yesibini ephakamileyo yobungcali (ezahlukeneyo iinkqubo ngokutsha nophuhliso lobungcali ukuze iingcali), iinkqubo zemfundo ishishini.
orientation Practical imfundo ibaluleke ngokukodwa yezoqoqosho namhlanje. Kungenxa yoko le nto kwiYunivesithi ibeka ugxininiso olulodwa sibonakalisa neengcali ezinamava ngokwesikhundla abahlohli. Iintloko iibhanki, inshorensi kunye zophicotho neenkampani kwakunye izakhiwo ezinkulu zemali mveliso sebenza nabafundi bethu.
major State and Municipal Governance, Ulawulo lweprokjekthi
Provides training in Economics with qualification (degree) Bachelor of Economics, major Accounting, Uhlahlelo loPhicotho
6. “imeko, Municipal and Corporate Governance”
7. “uMthetho Civil”
20. “Ubuchwepheshe bezopolitiko”
39. “uMthetho wolwaPhulo”
41. “Ilwimi ezingaziwa”
47. Higher isikolo of Public ulawulo: “Public Service”
48. Institute of Business Administration yaye Business “Innovative Management”
49. International isikolo of Business “Innovative Business”
54. “Imfundo yendibano siqu”
1992 – the Finance Academy under the Government of the IRussian Federation
ukususela 14.07.2010 – the Financial University under the Government of the Russian Federation
Uyafuna discuss Financial University under the Government of the Russian Federation ? nawuphi na umbuzo, izimvo okanye ncomo